Koi azu - ihe ndi acha uhie uhie & oroma - hematite
Zụta azụmazu Koi eke dị na ụlọ ahịa anyị
Koi azụ quartz bụ nkume dị egwu. Red & oroma bụ hematite inclusions. Agba nke iron ọdịnaya aghọwo oxidized. Hematite na quartz na-abụkarị ihe dị iche iche achọtara iche, mana adịkarịghị ọnụ.
Hematite nwere agba ojii na agba nchara ma ọ bụ ọla ọcha-agba ntụ, agba aja aja na aja aja na-acha ọbara ọbara, ma ọ bụ ọbara ọbara. A na-egwute ya dị ka nnukwu mmanụ. Uzo di iche-iche tinyere mmanu akụrụ, martite, iron rose na specularite. Ọ bụ ezie na ụdị ndị a dịgasị iche, ha niile nwere ajị-acha ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara. Hematite siri ike karịa nchara dị ọcha, mana ọtụtụ na-emebi emebi. Maghemite bụ mineral hematite na magnetite metụtara oxide.
Crist si na hematite kristal nwekwara ike ime dị ka ịnweta nke abụọ guzobere site na usoro ihu igwe dị na ala, yana yana iron oxides ma ọ bụ oxygenhydroxides dị ka goethite, na-ahụ maka ụcha ọbara ọbara nke ọtụtụ ebe okpomọkụ, oge ochie, ma ọ bụ nke nwere oke ala.
Koi azụ quartz bụ mineral siri ike, nke nwere kristal jupụtara na mkpụrụ ndụ silicon na ikuku oxygen. A na-ejikọta amamịghe na usoro na-aga n'ihu nke SiO4 silicon oxygen tetrahedra, yana oxygen ọ bụla na-ekerịta n'etiti tetrahedra abụọ, na-enye usoro kemịkalụ zuru oke nke SiO2. Quartz bụ nke abụọ kachasị ukwuu na nchịkwa ụwa na azụ ala, n'azụ feldspar.
Koi azụ quartz pụtara
A maara Quartz dị ka onye na-agwọ ọrịa ma ọ ga-eme ka ike na echiche dịkwuo mma, yana mmetụta nke kristal ndị ọzọ. Ọ na-adọrọ, na-echekwa, wepụta ma na-achịkwa ike. Kọwaa Quartz na-ewepụ ụdị ike dị iche iche na - adịghị mma, na - egbochi ihe ọkụkụ dị na okirikiri, gụnyere anwụrụ ọkụ ma ọ bụ ikuku eletrik. Ọ na-edozi ma na-atụgharị na atụmatụ anụ ahụ, nke uche, nke mmetụta uche na nke mmụọ. Na-asachapụ ma mekwaa akụkụ ahụ na anụ ahụ dị nro ma na - eme dị ka onye mkpụrụ obi dị ọcha, na - ejikọ akụkụ ahụ na uche. Ọ na - eme ka ikike ọgụgụ isi dịkwuo mma. Ọ na - enyere aka na ntinye uche ma na - emeghe ncheta. Na-akpali usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma na-eme ka anụ ahụ nwee nguzozi.